I-Hostal Aeropuerto Ikamelo Elihlanganyelwe Umbhede Owodwa.
Igumbi elibheke kuvulandi phezulu, imibhede emibili eyodwa ongabelana ngayo nesinye isivakashi.
Ukufinyelela ekamelweni kunokhiye, futhi amasethi amabili alethwa, eyodwa ngeyakho neyomunye isivakashi.
Ukufinyelela kuzo zonke izinsiza
Ihostela elixubile (abesilisa nabesifazane) labafundi, ochwepheshe, noma ukuhlala kweholide, isikhala sokuhlala kwakho kwesikhashana e-Jalisco.
Umqondo owefulethi elincane elabelwe ezinye izivakashi.
Ukufinyelela ezinsizeni kufakiwe.
Umatilasi oyedwa futhi onethezeke kakhulu.
Izingubo zokulala ezijwayelekile, isethi yamashidi nengubo encane.
Ingubo itholakala ebusika.
Isikhala esinokukhanya okuningi, imidlalo yebhodi efana ne-chess, i-monopoly, i-jenga, amakhadi, njll, i-Wi-Fi, i-Stereo ene-AUX, ukuze ulalele umculo wakho ngenkathi usebenza, ikhishi lifakwe yonke into oyidingayo, izinongo, uwoyela. futhi ukupheka izinto, isiqandisi, umshini wokuwasha, insimbi, amanzi ashisayo eshaweni.
Kunendawo yokupaka imoto eyodwa, enokuthambekela okukhulu, sicela uthathe izinyathelo zokuphepha, noma ukwehluleka, shiya imoto yakho ngakolunye uhlangothi lomgwaqo.
Lapha ungakwazi ukujabulela ezolile ukuhlala obunobunye ungakwazi ukupheka, ukuwasha izingubo, wehlise umoya, noma umane ukufunda, ukwenza ehhovisi ekhaya, ukubamba ku-intanethi, ulalele umculo kusuka efonini yakho nge-stereo elisizayo, play nezinsizwa yakho noma ukufunda nje incwadi.
Kucelwa ukuthi kuhlonishwe izinhlelo ezijwayelekile zezakhamizi zakulesi sigatshana, nokuthi ungawudlali kanjani umculo onomsindo ngemuva kwehora leshumi ebusuku, nangaphambi kwehora lesithupha ekuseni.
Siyaziqhenya ukwabelana ngale ndawo ngaphandle komsindo nokuphithizela kwedolobha, ezweni elithe xaxa, umoya omusha futhi okhululekile.
Ukuhlukaniswa kugandaywe kusuka emakhothameni okungena, kuze kube sekugcineni, ngicela uthathe izinyathelo zokuphepha, futhi ulethe izicathulo ezinethezekile, zemigwaqo ewubhuqu, uma kwenzeka ufika uhamba, indlu itholakala ezansi kwesihlukaniso, futhi cishe ikhilomitha ukuhamba kusukela emnyango ukwehlukaniswa iziqephu endlini ehostela.
Sicela uphathe ithawula lakho, nezinto zokugeza zakho siqu njengoba singakunikezeli kanjalo.
Kuphuma ngo-12pm (emini). Kodwa ungashiya izinto zakho kuze kube ngu-8pm ngalolo suku, uma udinga ukulinda indiza yakho, noma izinto zokuhamba zokuhamba, futhi ngeke ukwazi ukusebenzisa umbhede noma ilokha ngalesi sikhathi, ngoba isetshenziselwa ukuhlanza.
Ungagcina izikhwama zakho ngaphansi kwezitebhisi uma kwenzeka kuba nesinye isivakashi esifikayo, futhi ulinde ukuhamba kwaso esitezi esiphansi sendlu.
Inqubo yokwamukela izivakashi empeleni ingo-2 ntambama, kodwa ungakwazi ukweluleka uma udinga ukufika ngesinye isikhathi.
Noma yimiphi imibuzo noma ukuphawula, nanoma yisiphi isicelo sicela uhlale uxhumene ngqo nge-whatsapp nomphathi wakho @.
(**Sicela uqaphele ukuthi ukunakekelwa kwekhaya kungase kwenziwe ngesizini ephansi ukuze kuqinisekiswe ukuthi wonke umuntu unolwazi olungcono kakhulu**)
Kumele kukhunjulwe ukuthi sitholakala endaweni eqhelile yedolobha emaphethelweni enkabeni yedolobha laseGuadalajara, cishe imizuzu engama-45 ngezithuthi zomphakathi kuya ngethrafikhi, isignali ye-inthanethi ingahluleka kwesinye isikhathi, i-wifi. kungaba ngezinye izikhathi kancane.
Izinkinga zamanzi zenzeka kumasipala wonke, yingakho siphakamisa ukuthi UNAKEKELE AMANZI futhi uwashe ngemijikelezo emifushane nempahla emincane yokuwasha, okungcono ebusuku uma kuvulwa amaphampu.
Uma ukubhuka kwakho sekwenziwe, uzothola inkomba yokufinyelela kanye nokunyakaza ukuze ukwazi ukuhamba kalula endaweni ezungezile kanye nezakhiwo zezivakashi ezifana nechweba lase-Chapala, i-Ajijic, i-Cajititlán, ugcwalise indawo, izindawo nezindlela zokuhamba.
Sitholakala imizuzu engu-15 ukusuka esikhumulweni sezindiza, uma kwenzeka udinga isevisi yezokuthutha yangasese, siphinde sinikeze isevisi yomuntu siqu ezivakashini zethu ngezindleko ezingabizi kakhulu kunomncintiswano. Ungangabazi ukuxhumana nomphathi wakho uma udinga ukusuka endaweni eyodwa ukuya kwenye ngemoto. Sikuthokozela ukukunikeza isevisi ngezinga elikhethekile nelifinyeleleka kalula.
Okokugcina, sikufisela ukuhlala okunethezekile nokulula.
Eduze kwezinkampani ezibaluleke kakhulu zezimboni nezindawo zezivakashi ezifana ne-IBM, SANMINA, ZF, HONDA, ZOLTEK, POLESA, WALMART CEDIS GDL, HERSEYS, URREA, HELLA, ETC.
ISIkhumulo sezindiza sase-GDL, CUTONALA, CHAPALA, TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPALA, CAJITITLAN, ARENA VFG, RESTAURANT CAMPESTRE LOS TRES POTRILLOS, BIRRIERIAS CHOLOLO, MARISCOS EL CARNAL, PHAKATHI KWABANYE.
Silungiselele indlu ezoba yikhaya lakho, indawo yakho yokuhlala, uhlobo lwehostela, indawo lapho mhlawumbe uzokwabelana nabanye abathengayo, izihambi, noma abathandi bomculo, mhlawumbe uzoza emsebenzini, noma ukuze uzihlukanise, noma ngabe yisiphi isinqumo. okuyiwona kuyoba lapha, ngifuna ukukutshela ukuthi siye moya ngayo izinto eziningi eziyisisekelo kungase kudingeke, futhi izinto esinazo ngalesi sikhathi, akusiyo indawo engcono emhlabeni, futhi akuyona indawo zikanokusho, kodwa ngokuthobeka ukukunikeza indawo lapho ukuya khona, ngisho noma une etheni, okuyiwona sikucela ngamandla ukuthi uyayazisa imizamo yethu kanye nokuzinikela, futhi ngokusobala sifuna ukuthuthukisa usuku nosuku ukuze ufuna ukubuya futhi ngokuzayo lapho usivakashela, uyomangala ngokujabulisayo.
Ngokusekela kwakho nokukhetha ekhoneni lethu, sithemba ukuthi sizokhula futhi sithuthukise izindawo zethu.
Indlela esizizwa ngayo ukuthi lesi isexwayiso esanele sokugwema ukuphawula okuphambene, sibeka obala ngokuphelele ngolwazi olwabiwe lapha, futhi sifuna ukugwema noma yikuphi ukungaqondi.
Sakhe indawo ethengekayo futhi lokho nakho esifuna ukukunikeza. Izivakashi zethu zikhuthazwa ukuba zisukumele phezulu mayelana nalokho ezizodinga, futhi zisebenzise zonke izindawo esitholakala kuzo, kanye nempahla yazo.
Leli khaya liwubufakazi bokusebenza kanzima nokuzikhandla okuvela entsheni ethobekile, esebenza kanzima njengani, ngokwazi ukuthi kunabantu abasebenza kanzima abakhetha ukuhlala nathi ngamaholidi alinganiselwe kusho lukhulu.
Ngakho-ke sikholelwa ukuthi izivakashi kufanele zixoxe nganoma yiziphi izinkinga noma izinkathazo ezinazo ukuze siqinisekise ukuthi zinokuvakasha okujabulisayo e-Jalisco. Yilokhu esikwenzayo. Sicela usisize senze isiqiniseko sokuthi unohambo oluphephile.
Silungiselele indlu ezoba yikhaya lakho, indawo yakho yokuhlala, uhlobo lwehostela, indawo lapho mhlawumbe uzokwabelana nabanye abathengayo, izih…